मजदुरमैत्री मे | We Nepali
सुरेन्द्र नेपाल श्रेष्ठ | २०७९ जेठ १२ गते १५:३५
अंग्रेजी र देवनागरी लिपिमा सबैभन्दा कम अक्षरको महिना हो मे । धेरै दिन (३१ दिन) भएको सात महिनामध्ये भने यो तेश्रो महिना हो। शुरुमा क्यालेन्डरको प्रयोग हुँदा १० महिनाको मात्र एक वर्ष हुन्थ्यो। त्यतिबेला भने मे तेश्रो महिना थियो। पहिलो दुई महिना थप भएपछि भने मे वर्षको पाँचौ महिना हुन पुग्यो। मे दक्षिणी गोलार्धमा शरद र उत्तरी गोलार्धमा वसन्त ऋतुको महिना हो। मेलाई लिली फूलको महिनाको रुपमा पनि लिइन्छ।
ग्रीक देवी माइयाको नाममा यो महिनाको नामकरण गरिएको मानिन्छ। उनलाई प्रजनन् क्षमताकी देवी भनिन्छ । रोमनहरुले मान्ने गरेको देवी ”बोना डी” लाई ”माइया” सँग तुलना पनि गरिन्छ । उनीहरुले मे महिनाभरि बोना देवीको पर्व मनाउने गर्दथे । बेलायतमा एंग्लो-स्याक्सनकालमा यस महिनालाई Þrimilcemōnaþ भनिन्थ्यो । यस शब्दको आधुनिक अंग्रेजी अर्थ ‘थ्री मिल्किन्ग्स मन्थ’ हुन्छ । यस मौसममा गाईले दिनमा तीनपटक दुध दिने हुँदा त्यसो भनिएको थियो।
मे महिनाको राशी वृष (अप्रिल २०-मे २०) र मिथुन (मे २१-जुन २०) हुन् । यो महिना अप्रिल र जुन जस्तै महिलाहरुको नामकरण हुने महिना पनि हो । संयुक्त राज्य अमेरिका, इङ्गल्याण्ड, स्कटल्याण्ड, आयरल्याण्ड, क्यानडा, जर्मनी, नेदरल्याण्ड , फ्रान्स, अष्ट्रेलिया र न्यूजिल्याण्डका साथै जर्मन मूलका रुसीहरूले पनि मे नाम प्रयोग गरेको देखिन्छ। मे एउटा जात पनि हो। केहीले आफ्नो नामको बिचमा पनि मे राखेका हुन्छन। बेलायतका एक प्रधान मन्त्रीको नाम थेरेसा मे थियो। अमेरिकन कबि तथा उपन्यासकार मे सार्टन (१९१२-१९९५) र बेलायती कलाकार डेम मे व्हाइटी (१८६५-१९४८) पनि विश्व प्रख्यात नै थिए। कुनै समय वैवाहिक जीवनका लागि मे महिनालाई अशुभ महिना मानिन्थ्यो । यसबारे एउटा कविता ”म्यारी इन मे एण्ड यु विल रू द डे’ ‘ज्यादै प्रचलित थियो।
संयुक्त रास्ट्र संघको निर्णयअनुसार संसारभरि नै विभिन्न दिनमा फरक-फरक अन्तर्रास्ट्रिय दिवस मनाउने चलन छ । यस्तो अभियानहरुले विश्वव्यापी समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्दै विभिन्न चासोका विषयहरूमा आमजनतालाई शिक्षित गर्न प्रत्येक देशका सरकारको राजनीतिक इच्छाशक्तिसहित स्रोत साधनहरू परिचालन गर्न अभिप्रेरित गर्दछ। यसको साथै मानव सभ्यताको विकास क्रममा प्राप्त विशेष उपलब्धिहरुको सुदृढीकरण र प्रचार प्रसार गर्न
वर्षभरि नै यस्ता दिवसहरु मनाउने प्रचल भएअनुसार मे महिनामा मुख्यत निम्न दिवसहरु मनाइन्छन्।
मे १ तारिख अन्तर्रास्ट्रिय श्रमिक दिवस, २ तारिख विश्व टुना दिवस, ३ तारिख विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, ५ तारिख विश्व पोर्तुगाली भाषा दिवस, ८ तारिख दोस्रो विश्वयुद्धमा ज्यान गुमाउनेहरूका लागि सम्झना र मेलमिलाप दिवस, १० तारिख अर्गानिया अन्तर्राष्ट्रिय दिवस, १२ तारिख अन्तर्राष्ट्रिय वनस्पति स्वास्थ्य दिवस, १४ तारिख विश्व प्रवासी पंक्षी दिवस, १५ तारिख अन्तर्राष्ट्रिय परिवार दिवस, १६ तारिख सँगै सबैसँग शान्तिपूर्ण बस्ने अन्तर्राष्ट्रिय दिवस, अन्तर्राष्ट्रिय प्रकाश दिवस र वैशाख पूर्णिमाको दिन, १७ तारिख विश्व दूरसञ्चार तथा सूचना समाज दिवस, २० तारिख विश्व मौरी दिवस, २१ तारिख अन्तर्राष्ट्रिय चिया दिवस र संवाद र विकासका लागि सांस्कृतिक विविधताको लागि विश्व दिवस,२२ तारिख जैविक विविधताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस, २३ तारिख प्रसूति फिस्टुला अन्त्य गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दिवस, २५ तारिख गैर-स्वशासित क्षेत्रहरूका मानिसहरूसँग एकताको हप्ता, २९ तारिख संयुक्त राष्ट्र शान्ति सेनाको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस, ३१ तारिख विश्व धुम्रपानरहित दिवस पर्दछन् । राष्ट्रिय रुपमा पनि विभिन्न देशहरुले आफ्नै आवश्यकता र महत्वअनुसार विभिन्न दिवसहरू मनाउने गर्दछन् । यसैक्रममा बेलायतमा मे १६ देखि जुन १६ सम्म मुस्कान महिनाको रुपमा विभिन्न परोपकारी कामहरु गरिन्छन् । आज भन्दा ४६ वर्ष अगाडी शुरु भएको यो अभियानले खुशी जीवनयापन गर्न स्वस्थ्य मुखको आवश्यकता बारे विभिन्न संदेशमूलक कामहरु गर्ने गरेको छ । कमजोर मुखको स्वास्थ्यले मुखभित्र समस्या मात्र पैदा गर्दैन, हालैको अनुसन्धानबाट यसले मधुमेह, हृदय रोग, स्ट्रोक जस्तो गम्भीर समस्याहरु पनि निम्त्याउन सक्ने देखाएको छ । त्यसैले यो महिनाभरि सबैको ओठमा मुस्कान ल्याउने कार्यक्रमहरुसहित विभिन्न परोपकारी कामहरुको लागि आर्थिक संकलन गरिन्छ।
मे महिना भन्ने बित्तिकै ‘मे डे’ सम्झिने गरिन्छ। ”संसारभरका मजदुरहरु एक हौं” भन्ने कार्ल मार्क्सको कम्युनिस्ट घोषणा पत्रको मुख्य नारा भएको कारण श्रमिक दिवस केवल कम्युनिस्टहरुले मान्ने हो कि भन्ने सोचाई छ । तर यसको थालनीको पृष्ठभूमि अलि फरक छ।
औध्योगिक क्रान्तिको विकाससँगै श्रमिक र ट्रेड युनियनको माग पनि बढ्यो । सन् १८५० को दशकमा विश्वभर दैनिक काम १० बाट आठ घण्टामा घटाउने लक्ष्यसहित मागहरु उठाउन थालियो । दिनमा आठ घण्टा काम, आठ घण्टा मनोरंजन र आठ घण्टा आराम गर्न पाउनु पर्छ भन्ने त्यो आन्दोलनको मुख्य माग थियो । सन् १८८६ मा अमेरिकी श्रम महासंघले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनमा आठ घण्टा कामको माग गर्न मे १ मा एक सामान्य हड्तालको आह्वान गर्‍यो, जुन आज हेमार्केट दंगा भनेर चिनिन्छ।
शिकागोमा भएको उक्त प्रदर्शनमा भीडमा अज्ञात रुपमा बम विस्फोट भयो र प्रहरीले गोली चलायो। झडपमा सात प्रहरी अधिकारी र कम्तिमा चार सर्वसाधारणको मृत्यु भयो र ६० भन्दा बढी प्रहरी अधिकारी र ३० देखि ४० सर्वसाधारण घाइते भएका थिए। त्यसपछि धेरै नागरिकलाई पक्राउ गर्ने र केहीलाई सजायस्वरुप झुण्ड्याएर मृत्युदण्ड समेत दिइएको थियो । सन् १८८९ मा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादी पार्टीहरू र ट्रेड युनियनहरूको युरोपेली महासंघले प्रत्येक वर्ष १ मेलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको रूपमा मान्ने निर्णय गर्यो । आजसम्म मे महिनाको पहिलो दिन विश्वभर श्रमिक अधिकारको प्रतीक बनेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिका र क्यानडामा भने श्रमिक दिवस प्रत्येक सेप्टेम्बरको पहिलो सोमबार मनाउने गरिन्छ । यो दिनलाई श्रम दिवस मनाउन अमेरिकामा सन् १८८७ देखि नै धेरै राज्यहरुमा मान्यता दिइए पनि सन् १८९४ देखि मात्रै देशैभरि आधिकारिक रुपमा छुट्टी दिन थालियो । अमेरिकामा पनि विस्वका प्राय सबै देशले मान्ने गरेको मे १ कै दिन श्रम दिवस मनाउने कोशिश गरिएको थियो तर हालसम्म सफलता भने प्राप्त गर्न सकिएको छैन। उक्त दिन मनाउँदा त्यतिबेला भएको दंगालाई प्राथमिकता दिएको शन्देस जान्छ भन्ने धारणा रहेको छ । त्यति पहिला नै मजदुरहरुको हितमा सैधान्तिक रुपमा पूरा गरिएको माग आजसम्म पनि ब्यावहारिक रुपमा भने अति विकसित देशहरुमा समेत लागू भएको देखिँदैन।
विस्वमा धेरै साम्राज्यहरुले उपनिवेश गर्दै आएका थए । त्यसबाट संसारका प्राय सबै देशहरु मुक्त भएको इतिहास छ । यसरी स्वतन्त्र भएका वा कुनै महत्वपूर्ण घटना घटेको दिनलाई सम्बन्धित देशले रास्ट्रिय दिवसको रुपमा विशेष रुपमा मनाउने गर्दछ । संसारभरि मे महिनामा स्वतन्त्रता दिवस मनाउने देशहहरु लात्भिया मे ४, रोमानिया मे ९, सोमालिल्याण्ड मे १८, पूर्वी टिमोर २० मे, मोन्टेनेग्रो मे २१, इरिट्रिया २४ मे, जोर्डन मे २५, गायाना अनि जर्जिया मे २६, अजरबैजान २८ मे हुन्। त्यसैगरी मार्शल टापुको संविधान दिवस १ मे, नर्वेको संविधान दिवस मे १७, क्यामरून राष्ट्रिय दिवस मे २०, इक्वेडरको पिचिंचाको युद्ध दिवस मे २४, नेपाल मे २९ आइतबार गणतन्त्र दिवस र क्रोएशिया राज्य दिवस मई ३० मा मनाउने गरिन्छ ।
नेपाललगायत विश्वका प्राय सबै देशहरुमा बुबाआमाको मुख हेर्ने जस्तै विशेष दिन हुन्छन् । मे महिना आमाहरुलाई माया र कृतज्ञता देखाउने महिना हो। अमेरिकासहित वरिपरिका प्राय सबै देशहरु, बेलायतबाहेक युरोपका प्राय देशहरु, अस्ट्रेलिया, अफ्रिका, एशियाका प्राय देशहरुमा मे ८ तारिखमा आमालाई सम्मान गरिन्छ । त्यस्तै मे १ अंगोला, केप भर्डे, हंगेरी, लिथुआनिया, पोर्चुगल, स्पेन, मोजाम्बिक, रोमानिया, साओ टोमे र प्रिन्सिप, १० मे मेक्सिको, एल साल्भाडोर, ग्वाटेमाला, १५ मे पाराग्वे, १९ मे किर्गिस्तान, २६ मे पोल्याण्ड, २७ मे बोलिभिया, २९ मे अल्जेरिया, क्यामरुन, डोमिनिकन रिपब्लिक, फ्रान्स, मेडागास्कर, हाइटी, मौरिसस, माली, मोरक्को, नाइजर, सेनेगल, स्वीडेन, ट्युनिसिया, ३० मे निकारागुआमा आमा सम्झिने वा संगै समय बिताउने गरिन्छ ।
यो महिना केही देशहरुमा भने बुबालाज्ञ विशेष सम्मान दर्शाउँछन् । मे ६ मा मोल्डोभा र त्यसको नजिकै रहेको देश रोमानियामा ८ मे मा बुबाको दिन मानिन्छ। जर्मनीमा, फादर्स डे (वा भेटरट्याग) एसेन्सन डेमा मनाइन्छ, इस्टरको ४० औं दिनमा मनाइने यो सधैं मे महिनाको बिहीबारमा पर्छ। यस वर्ष यो बिहीबार, मे २६ मा मनाइनेछ । यसदिन राष्ट्रिय बिदा नै दिइन्छ। धेरैजसो क्षेत्रहरूमा भोलिपल्ट शुक्रबार पनि बिदा हुँदा लामो बिदासहित विशेष रुपमा फादर्स डे मनाउने गर्दछन् । त्यहाँ आमालाई पनि मे ७ तारिखमा मानिने हुँदा बुबा आमाको महिना भन्न सकिन्छ । उता दक्षिण कोरियामा भने आमाबुबा दुवैलाई एकै दिन सम्मान गरिने हुँदा मे ८ लाई अभिभावक दिवस पनि भनिन्छ । नेपालमा तिथि मिति भने जस्तै कतिपय देशमा यो दिन धार्मिक उत्सवसंग जोडिने हुँदा प्रत्येक वर्ष एकै दिन भने नपर्न पनि सक्छ ।
ज्ञान विज्ञानका कारण नै संसारमा थुप्रै खालका परिवर्तनहरु हुँदै आएका छन्। नयाँ नयाँ आविस्कारहरु नभएको भए हामी अझै पनि घोडा सवारमा नै सिमित हुन्थ्यौं होला। यही महत्वलाई मध्यनजर राख्दै अमेरिकामा सन् १९९८ देखि मे महिनाभरि विभिन्न कार्यक्रमहरुसहित रास्ट्रिय आबिस्कार महिना मनाउने गर्दै आइएको छ । मे महिनामा भएका केही महत्वपूर्ण आविस्कारहरु यसप्रकार छन्।
सन् १८८८ मे १ मा निकोला टेस्लालाई “बिद्युतद्वारा चल्ने इन्जिन” को लागी पेटेन्ट प्रदान गरिएको थियो । अहिले विश्व प्रशिद्ध हुँदै गरेको विद्युतीय गाडीका मालिक आलेन मस्कले उनी निकोलालाई सम्मान गर्दै टेस्ला नामाकरण गरेका हुन्। सर्वप्रथम पेटेन्ट राइट दर्ता गर्न सफल महिला मेरी किज थिइन् । उनले सन् १८०९ मे ६ कादिन सिल्क वा धागो बनाउने प्रबिधि दर्ता गराएकी थिइन्। त्यसै दिन सन् १८५१ जोन गोरीले बरफ बनाउने मेसिन, सन् १७८७ १५ मे लन्डनका एक वकिल जेम्स पकलले संसारको पहिलो मेसिन गन निर्माण गर्ने पेटेन्ट दर्ता गराएका थिए। त्यसैगरी सन् १८३० मे १८ इङ्गल्याण्डका एडविन बियर्ड बडिंगले घाँस काट्ने मेशिन, सन् १८३० मे २० – डी. हाइडले फाउन्टेन पेन, १७९६ मे २७ जेम्स म्याक्लिनले पियानो, सन् १८५७ मे २६ मा रोबर्ट मुशेटले इस्पात निर्माण गर्ने विधिहरू, सन् १८५३ मई १४ गेल बोर्डेनले कन्डेन्स्ड दूध बनाउने बिधिहरुको पेटेन्ट अधिकार दर्ता गरेका थिए। सन् १७४२ मे २८ मा पहिलो इनडोर स्विमिंग पूल गुडम्यान फिल्ड्स, लन्डनमा खोलियो। त्यस्तै लेवी स्ट्रस र जेकब डेभिसले मे २० मा प्यान्टको लागि पेटेन्ट प्राप्त गरेपछि नीलो जीन्सको आधिकारिक आविष्कार मे १८७३ मा भएको थियो।
खासै सुन्नमा नआएको राष्ट्रिय दाजुभाइ दिवस मुख्यत: संयुक्त राज्य अमेरिकामा मनाइन्छ तर संसारभरका अन्य धेरै देशहरूमा पनि मनाउने क्रम बढ्दो छ । अष्ट्रेलिया, रुस, भारत , फ्रान्स र जर्मनी लगायत अन्य केही युरोपेली देशहरूले मे २४ मा दाजुभाइ भेटघाट वा फोनमा सम्पर्क गर्ने चलन छ। यसको शुरुवात अलाबामा बसोबास गर्ने सी. ड्यानियल रोड्सले गरेका थिए। सन् २००५ देखि मे २४ लाई उनले भाइ दिवसको रुपमा मान्न विभिन्न कार्यक्रमहरु आयोजना गरेका थिए।
संसारका सबै देशहरुमा हरेक महिनामा विभिन्न प्रकारका चाडपर्व तथा महोत्सवहरु मनाइ रहेका हुन्छन । लोकप्रियताको आधारमा कतिपय उत्सवहरु अन्तर्रास्ट्रियकरण पनि हुने गर्दछन् । संसारभरका मानिसहरु आफूले रुचाएको पर्व मनाउन ती देशहरुमा जाने गर्दछन् । विश्वका धेरैजसो क्षेत्रहरूमा मौसम न्यानो हुँदै जाने र वसन्त ऋतु आगमन हुने हुँदा प्राय देशहरुमा गीत संगीतसहितको महोत्सबको लागि उपयुक्त मानिन्छ । मे महिनामा विभिन्न देशमा हुने केही प्रख्यात महोत्सबबारे चर्चा गरौं।
७- २९ मेसम्म ब्राइटन (बेलायत) मा चल्ने यो महोत्सबमा संसारभरका कलाप्रेमीहरु जम्मा हुन्छन् । यो संगीत, कला, थिएटर, नृत्य, चलचित्र, सर्कस, बहस, साहित्य सहितको ठूलो उत्सव हो। यो इङ्गल्याण्डको सबैभन्दा ठूलो वार्षिक बहु-कला महोत्सव हो। सन् १९६७ देखि शुरु भएको यो उत्सवमा ब्राइटन र होभ भरिका ठाउँहरू रचनात्मकता र दृश्य कलाद्वारा भरिभराउ हुन्छा । आयोजकहरुले यहाँ विश्वभरका प्रभावशाली र रोमाञ्चक कलाकारहरूलाई आमन्त्रण गर्ने गर्दछन् । यस वर्षको अतिथि निर्देशक डेभिड श्रीग्ले हुन्। ब्राइटन महोत्सवको उद्देश्य शहरवासी र आगन्तुकहरूलाई कलामा नयाँ रूपको स्वाद चखाउनु हो।
भियना महोत्सव अस्ट्रियाको सबैभन्दा ठूलो उत्सव मध्ये एक हो। प्रत्येक मे र जुनमा ५-६ हप्तासम्म चल्ने यो महोत्सबमा दुई लाखभन्दा बढी मान्छेहरु जम्मा हुन्छन् । सन् १९५१ देखि भियनाको सिटीहल अगाडी नि:शुल्क ओपन-एयर कन्सर्ट हुँदै आएको छ। सन् २०१६ देखि शुरु भएको क्यालिफोर्निया रूट्स यस बर्ष मोन्टेरेमा (अमेरिका क्यालिफोर्निया ) मे महिनाको २६ देखि २९ सम्म बिबिध सांगीतिक कार्यक्रमहरुसहित मनाउँदै छन्।
त्यस्तै मे महिनामा हुने अन्य प्रख्यात उत्सवहरुमा स्पेनमा हुने प्राइमा भेरा साउण्ड, एटलाण्टा अमेरिकामा हुने शाकी निज फेस्टिवल, अमेरिका र मेक्सिकोमा हुने सिन्को दे मायो, मेम्फिज अन्तर्रास्ट्रिय महोत्सव (टेनेसी, अमेरिका), रियो दि जेनेरिओ, ब्राजिलमा हुने ओइ रिओ प्रो आदि हुन् ।
त्यस्तै चेउङ चाउ बन महोत्सव, हङकङ, रेक्जाभिक आर्ट फेस्टिवल, आइसल्याण्ड, वाइसाक , जाभा, इन्डोनेसिया, हमामात्सु काइट फेस्टिवल, जापान, बन बैंग फाई रकेट महोत्सव, थाइल्याण्ड,बर्गन अन्तर्राष्ट्रिय महोत्सव, नर्वे,, इलेक्ट्रिक डेजी कार्निवल लस भेगास, अमेरिका, हे फेस्टिवल अफ लिटरेचर एण्ड आर्ट्स – हे-अन-वाई, ब्रेकन बीकन्स नेशनल पार्क, साउथ वेल्स, मडेइरा आइल्याण्ड फ्लावर फेस्टिवल – फन्चल, मडेइरा, पोर्चुगल, न्यू अर्लिन्स ज्याज र हेरिटेज फेस्टिवल – अमेरिका,पासपोर्ट डीसी फेस्टिवल – वाशिंगटन डीसी, अमेरिका,प्राग बियर महोत्सव – प्राग, चेक गणतन्त्र ट्यूलिप महोत्सव – एम्स्टर्डम, नेदरल्याण्ड आदि विभिन्न महोत्सवहरुमा सम्बन्धित देशको कला, धर्म, साहित्य, सस्कृति, परम्परा झल्कने प्रदर्शनी गरिन्छ । यीबाहेक फ्रान्समा हुने कान्स अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवको बिशेष महत्व छ । संसारभरिका नाम चलेका कलाकारहरु जम्मा हुने मनोनयनमा परेका चलचित्रहरु प्रदर्शन गर्ने र विभिन्न कार्यक्रमसहित च्यारिटी डिनरको आयोजना गरि उल्लेख्य आर्थिक संकलन गरिन्छ । केही उदारहणहरु, चोपर्ड डिनर एण्ड पार्टी प्रति व्यक्ति पांच हजार पाउण्ड, जीन पिगोजीको पूल पार्टी लन्च, इभा लङ्गोरिया पार्टी प्रति व्यक्ति कम्तिमा तिन हजार पाउण्ड , भ्यानिटी फेयर पार्टीप्रति व्यक्ति १२ हजार पाउण्ड , चोपर्ड ट्राफी वार्षिक डिनर पार्टी प्रतिव्यक्ति दश हजार पाउण्ड अमेरिकन फाउन्डेसन फर एड्स रिसर्च सिनेमा अगेन्स्ट एड्स पार्टी – ब्ल्याक-टाई कार्यक्रम प्रतिव्यक्ति १३ हजार पाउण्ड देखिपाँ लाख पाउण्ड सम्म टिकट शुल्क तिर्न पर्ने हुन्छ।
विश्वमा धेरै सार्बजनिक छुट्टी दिने देश मध्ये नेपाल पनि अग्र स्थानमा नै पर्दछ। मे महिना भित्र नेपालमा निम्न उत्सबहरु मनाउन बिदा दिने गर्दछ । २ मेमा सोमबार रमजान इदुल फिक्रा (ऐच्छिक बिदा), १३ मे शुक्रबार निर्वाचनको दिन सार्वजनिक बिदा (यस बर्ष मात्रै ),
१६ मे सोमबार बुद्ध जयन्ती (अस्थायी मिति) सार्वजनिक बिदा, १६ मे सोमबार उभौली पर्व ऐच्छिक बिदा, मे २९ आइतबार गणतन्त्र दिवस (गणतन्त्र दिवस) सार्वजनिक बिदा दिने परम्परा छ।
बेलायतमा बसोबासरत अधिवक्ता सुरेन्द्र नेपाल श्रेष्ठ विविध विषयमा कलम चलाउँछन् ।